Waggoottan 8f Kwaataaritti yaalamaa kan turte aadde Meeroon har’a halkan Finfinnee ni galti – Fana Broadcasting Corporate
Waggoottan 8f Kwaataaritti yaalamaa kan turte aadde Meeroon har’a halkan Finfinnee ni galti
Finfinnee, Eebila 9, 2011(FBC)-Waggoottan 8n darbaniif Kwaataaritti yaalamaa kan turte aadde Meeroon Makoonnan har’a halkan Finfinnee akka galtu Minsteerri Dhimma Alaa beeksiseera.
Aadde Meeroon Kwaataaritti balaa uukkamsa aaraa hojjechiistonni ishee irraan gahaniin miidhamtee waggoottan 8f hoospitaala Hamaditti yaalamaa kan turte yoo ta’u, har’a halkan gara biyya isheetti ni deebiti jedhameera.
Aadde Meeroon akka biyyatti deebitu ta’uu kan danda’e muummeen ministiraa Dooktar Abiy Ahimad yemmuu daawwannaa hojii Kwaataaritti gaggeessaa turanitti gaaffii mootummaa biyyattiif dhiyeessaniin waliigaltee irra gahamee ta’uu ibsameera.
Mootummaan Kwaataaris baasii aadde Meeroon waggaa 1f ittiin yaalamtuu fi baasii imalaa kan cufu ta’uu ibsameera.
Ministeerri Dhimma Alaa Ministeera Eegumsa Fayyaa waliin ta’uun simannaa fi hordoffii barbaachisaa akka taasisuuf beeksisuun isaas ibsameera.